ကြာသပတေးနေ့ည ယူနိုက်တက်သတင်းတိုများ… ယူနိုက်တက် အသင်းသည် ဒီလစ်ကို ပထမတုန်းက တစ်နှစ်လစာငွေ ယူရို(14) သန်းနှင့် (5) နှစ်သက်တမ်းရှိ စာချုပ်ကိုချုပ် ကမ်းလှမ်းပေမယ့် ပယ်ချခံရသည်။ သို့ပေမယ့် ယူနိုက်တက်အသင်းသည် ယခုအခါ ဒီလစ်ကိုကမ်းလှမ်းရာတွင် ယင်းထက်ပိုကောင်းမည့် ကမ်းလှမ်းမှုဖြင် ကမ်းလှမ်းသွားမည့် အတွက်ကြောင့် ဒီလစ်ဘက်က လက်ခံလိမ့်မည်ဟု ယူနိုက်တက် […]
“သီရိလင်္ကာ အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲမှု ဆက်စပ်သံသယဖြစ်ဖွယ် နိုင်ငံခြားသားကို ရန်ကုန်မှာဖမ်းမိ”
“သီရိလင်္ကာ အကြမ်းဖက်ဗုံးခွဲမှု ဆက်စပ်သံသယဖြစ်ဖွယ် နိုင်ငံခြားသားကို ရန်ကုန်မှာဖမ်းမိ” သီရိလကာင်္နိုင်ငံ မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက် ဗုံးခွဲမှု နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆက်စပ် သံသယ ဖြစ်ဖွယ် နိုင်ငံခြားသားကို ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းက ရန်ကုန် က ကျောက်တံတားမြို့နယ်အတွင်း ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်းခရိုင် ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး […]
“ကိုယ့်ချစ်သူကို ပက်ပက်စက်စက် အနိုင်ယူနည်း…”
ကိုယ့်ချစ်သူကို ပက်ပက်စက်စက် အနိုင်ယူနည်း (1) သူ့ကို ဘယ်တော့မှ ဦးစား မပေးပါနဲ့ ! ဥပမာ… မုန့်​ဆိုင်​ထိုင် စားပြီးတဲ့ အခါမျိုးမှာ ကိုယ်က အရင်​ဦးဆုံး ပိုက်​ဆံ ထုတ်​ပြီးသာ ရှင်းပြစ်လိုက် … (2) စကားကို တစ်ခွန်းထက် ပိုပြီး မပြောခိုင်နဲ့ ! […]
“ယူနိုက်တက် Vs ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဂန္ဓဝင် ပွဲစဉ် အတွက် နှစ်ဖက်အသင်း ကစားသမားစာရင်း ထွက်ပေါ်လာ”
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ဆု ဖလာ3းလုံး ဆွတ်ခူး ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ 1999 ခုနှစ် ဘောလုံး ရာသီ ရဲ့ နှစ် 20 ပြည့်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် နှစ်ဖက် အသင်း ရဲ့ ဂန္ဓဝင် ကစားသမားဟောင်း […]
“ချစ်သူကို အရမ်ချစ်မိသွားတဲ့သူတွေ လုပ်မိတတ်တဲ့ အရာ (၄) မျိုး…”
ချစ်သူကို အရမ်ချစ်မိသွားတဲ့သူတွေ လုပ်မိတတ်တဲ့ အရာ (၄) မျိုး… အချို့သူတွေက အချစ်ကြီးလွန်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကတစ်ခါတစ်ရံတော့ အဆင်ပြေပေမယ့် အမြဲတမ်းဆိုရင် တဘက်လူက နားလည်မပေးနိုင်တဲ့အခါ လမ်းခွဲတဲ့အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အချစ်ကြီး သူတွေက ဘယ်လိုတွေပြုမူတတ်လဲဆိုတာကို နားလည်ထားအောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (1)- စိုးရိမ်ကြီးလွန်းတယ် သူ့ကိုမချစ်တော့မှာ၊ မေ့သွားမှာကို […]
“၂၀၁၉ မှာ ဘဝအပြောင်းအလဲ ကြုံမယ့် ရာသီဖွားတွေ”
၂၀၁၉ မှာ ဘဝအပြောင်းအလဲ ကြုံမယ့် ရာသီဖွားတွေ နက္ခတ်ဗေဒင် ရာသီခွင် စနစ်အရ ရာသီဖွား (၁၂) ခု ရှိတဲ့အနက်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထဲ ဘဝနဲ့ချီတဲ့ အပြောင်းအလဲ ကြီးကြီးမားမားတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ ရာသီဖွား (၅) ခု ရှိပါတယ်။ ဒီရာသီဖွား (၅) ခုအနေနဲ့ […]
အသေခံဗုံးခွဲအကြမ်းဖက်သမား မြန်မာနိုင်ငံထဲမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာမှုမရှိသေး
အသေခံဗုံးခွဲအကြမ်းဖက်သမား မြန်မာနိုင်ငံထဲမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာမှုမရှိသေး သီရိလင်္ကာဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု တရားခံတွေနဲ့ ပတ်သက်သူတစ်ဦး မြန်မာနိုင်ငံထဲရောက်ရှိနေ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အသေခံဗုံးခွဲအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက် မှုဖြစ်စဉ်မှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ တရားခံတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက် သူတွေထဲက သံသယဖြစ်ဖွယ်နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ လ ထဲက၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး…ရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာမှုမရှိသေးကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိတယ်လို့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန က မေလ(၂၂)ရက်က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ […]
“Lee Min Ho နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မဟုတ်မမှန် အပုပ်ချသူတွေကို အရေးယူမယ်လို့ အေဂျင်စီမှ ထုတ်ပြန်”
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Lee Min Ho ဟာဆိုရင် အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့ အလျောက် အပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းတွေ၊ မဟုတ်မမှန်တဲ့ ကောလဟာလ သတင်းတွေကို ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ စတင်အောင်မြင်ချိန်ကနေ စတင်ပြီး ဒီနေ့အချိန်ထိတိုင်အောင် Lee Min Ho ကို တိုက်ခိုက်နေကြသူတချို့ကတော့ ရှိနေကြဆဲပါ။ ဒါတွေဟာ […]
passwordအရင်ပြောတဲ့ မိန်းခေးပုံမို့ မယုံဘူးဆိုတဲ့ Ocean ရှေ့ က ကလေးနှစ်ယောက် …
passwordအရင်ပြောတဲ့ မိန်းခေးပုံမို့ မယုံဘူးဆိုတဲ့ Ocean ရှေ့ က ကလေးနှစ်ယောက် … တာမွေမှာအလုပ်ကိစ္စသွားတုန်း လက်ထဲပစ္စည်းထုပ်တွေနဲ့ မနိုင်မနင်းနဲ့ မိုးရွာချတော့ပြေးလိုက်တာ ဘောင်းဘီထဲကဖုန်းထွက်ကျတာမသိလိုက်ဘူး …..။ နောက်မှအလုပ်ကိစ္စ ဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုတော့ ဖုန်းကမရှိတော့ ဘူး 😅😅😅 ဖုန်းကလည်း ကိုင်တာမှ4ရက်ပဲရှိသေးတယ် အသစ်ဆိုတော […]
မန်ကျည်းပင်နဲ့ လူ ၂ ယောက် (မှတ်သားဖို့ ကောင်းပါတယ်)
မန်ကျည်းပင်နဲ့ လူ ၂ ယောက် (မှတ်သားဖို့ ကောင်းပါတယ်) ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်ဖူးတဲ့ ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်ကို ပြန်လည်မျှဝေချင်ပါတယ်။ တစ်ခါတုန်းက ဒိသာပါမောက္ခဆရာကြီးဆီမှာ တပည့်တွေ ပညာသင်ကြတယ်၊ အဲဒီဆရာကြီးမှာ အရမ်းချောတဲ့ သမီးတစ်ယောက် ရှိတယ်ဆိုပါတော့။ သူရဲ့ တပည့်တွေထဲက ၂ ယောက်က သူတို့ဆရာကြီးရဲ့ သမီးကို […]